Ekwensu Atụmatụ - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ọnwụ Ekwensu na aka nri aka nri ya na ejiji ink na-eme ka nwoke dị mma
Ndị mmadụ na-achọ ime Ekwensu Ụdị na aka nri aka nri na ink ojii. Nke a na-enye ndị mmadụ ezigbo mma.
2. Ọnwụ Ekwensu na aka nri aka nri na-eme ka nwoke na-ahụ anya
Ndị mmadụ ga-ahọrọ iji Ụbọ Ekwensu a n'elu aka nri nke nwere ụdị ink dee. Nke a na-eweta ọdịdị ha.
3. Ụdị egbu egbu na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-aga iji aka Ekwensu na-eji aka nkoro pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
4. Ụdị egbu egbu n'apata ụkwụ dị n'apata ụkwụ na-eme ka nwoke dị egwu
Ndị mmadụ ga-ahụ Ekwensu egbu n'apata ụkwụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
5. Ụdị Ekwensu na ogwe aka na -eme nkpuchi ọchịchịrị mere ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị Ekwensu Ụdị na ogwe aka na-eji akwụkwọ ntu onk; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
6. Ụdị egbu egbu maka ụmụ mmadụ n'ubu ha na -emepụta ihe eji agba aja aja na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ hụrụ Devil Tattoo maka ụmụ nwoke n'ubu ha na ink nke na-acha aja aja; nke a na-eme ka ha dị oke mma
7. Ụdị egbu egbu na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha anụnụ anụnụ na ogwe aka dị ala na-egosi anya ha
Ndị mmadụ na-ahụ Ekwensu Ụdị na-acha anụnụ anụnụ na nke pink onk na ogwe aka ala. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
8. Ntugharị Ink nke Ekwensu a na-emetụta akpụkpọ anụ ka mmadụ wee dị ebube
Ụdị imepụta nke ink na Ekwensu Ụdị na ụkwụ na-emetụta ahụ mmadụ iji mee ka nwoke dịkwuo mma ma mara mma
9. Ụdị Ekwensu maka ụmụ nwoke na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ na-ahụ ụdị nkedo aja aja nke Ekwensu Ụkwụ na ụkwụ iji mee ka ha bụrụ dike
10. Ụdị Ekwensu na aka nri ya na-eweta anya dị mma
Ụmụ agbọghọ dịka nkedo pink ink design steepụ Ekwensu egbu na ubu aka nri. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
11. Ụdị egbu egbu na-eme ka nwoke dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ekwensu Ụdị na aka nri aka ya na nkwekorita ya. Nke a na-enye anya dị mma
12. Ọnwụ Ekwensu na ogwe aka ekpe nke aka ya na nwanyị na-eche ihu na-eme ka nwoke dị mma
Ndị mmadụ na-achọ ime Ekwensu Ụdị na aka ekpe aka ekpe na nwanyi na-eche ihu. Nke a na-enye anya dị mma.
13. Ụdị egbu egbu na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ Ekwensu Ụdị na aka ekpe ya na -emepụta ink na-egbuke egbuke iji weta anya ha mara mma
14. Ụdị egbu egbu na-eme ka ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa uwe na obere mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka Ụta Ekwensu n'akụkụ akwara ha iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
15. Ụdị egbu egbu na mkpịsị ink nke oji, na ụkwụ na-eme ka ụmụ mmadụ pụta
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-egbu egbu egbu egbu Ekwensu, na ụkwụ, nke na-enye ha ọdịdị ihu
16. Ụdị egbu egbu n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ Ekwensu Ụdị na ogwe aka ha na-acha uhie uhie na ink ime; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
17. Ndị mmadụ na-etinye Ụta Ekwensu dịka azụ n'azụ ha iji mee ka ha maa mma
Ndị mmadụ na-achọ iji egbugbere ọnụ Ekwensu gbuo azụ ha iji mee ka ha yie ihe mara mma na ihe mara mma na pubic
18. Ụdị egbu egbu na-eme ka nwoke dị mma
Ndị ikom Brown ga-aga maka oji na-acha oji na oji ojii Ekwensu egbu na aka ha; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya na-atụ egwu
19. Ọnwụ Ekwensu na azụ aka elu na-eme ka mmadụ nwee ọdịdị mara mma
Ndị dị ka Ekwensu egbu na azụ aka. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
20. Ụdị egbu egbu na-eme ka nwoke mara mma
Ihe e ji egbuke egbuke na-acha anụnụ anụnụ nke Ekwensu Ụdị na ogwe aka dị elu nke onye na-eme ka ọ dị mma ma mara mma
21. Ụdị egbu egbu n'akụkụ ụkwụ aka nri ka nwoke na-ahụ anya
Ndị mmadụ ga-ahụ Ekwensu egbu n'akụkụ ụkwụ aka nri. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
22. Ọnwụ Ekwensu n'akụkụ ntị ya na-eji ejiji ink nke oji mee ka mmadụ hụ swagger
Ndị mmadụ na-aga iji egbu egbu egbu Ekwensu n'akụkụ ntị ya na-eji ejiji ink nwaa mee ka ha dị ka swagger
23. Ụdị egbu egbu maka apata apata ụkwụ na-eweta anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka egbu egbu Ekwensu dị n'apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
24. Ntugharị Ink nke Ekwensu a na-emetụta akpụkpọ anụ ka mmadụ wee dị ebube
Ụdị imepụta nke ink na Ụjọ Ekwensu a n'elu ogwe aka na-emetụta ahụ mmadụ iji mee ka nwoke yie ọmarịcha ma mara mma
egbu egbu mmiriỤdị ekpomkpaudara okooko osisiechiche egbugbuegbugbu egbugbuzodiac akara akaraọdụm ọdụmụkwụ akandị mmụọ ozina-adọ aka mmaarịlịka arịlịkaNtuba ntughariegbu egbu ebighi ebimehndi imeweọnwa tattoosegwu egwuegbu egbu maka ụmụ nwokeụmụnne mgbunnụnụmma tattoosAnkle Tattoosenyí egbu egbuegbu egbu osisi lotusEgwu ugoegbugbu maka ụmụ agbọghọagbụrụ eboegbu egbu okpuaka mma akadi na nwunyeegbu egbu egbuGeometric Tattoosaka akaUche obiaka akakoi ika tattoongwusi pusindị na-egbuke egbukeegbu egbuegbu egbu hennarip tattoosima ima mman'olu oluenyi kacha mma enyiakpị akpịakwara obiegbu egbu diamondazụ azụna-egbu egbuakara ntụpọokpueze okpueze